IHuawei iceba ukunyusa ukuthunyelwa kwayo ukuya kwizigidi ezingama-200 kunyaka olandelayo | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Unyaka sele uphelile kwaye silindele ukuba abanye abavelisi baqale ukuqhayisa ngokudibana kunye nokudlula kwiithagethi zabo zonyaka kunye nokubhengeza iithagethi zonyaka olandelayo. Eminye imithombo yeendaba ichaze ngeethagethi zentengiso zeempawu ezimbini eziphambili zase China, iHuawei kunye neXiaomi.
Ngokwemithombo engaziwayo, I-Xiaomi kunye neHuawei zijolise ekwandiseni iithagethi zentengiso ukuya kuthi ga kwi-20% ye-2019, umntu othembekileyo. I-Xiaomi sele ifikelele kwiinjongo zayo zokuthunyelwa kwezigidi ezili-100 zonyaka, kodwa umthombo uthi uzibekele injongo ye-160 yezigidi ze-2019, ezimele ukonyuka okungaphezulu kwe-20%.
I-Huawei, kwelinye icala, ibambelela kumabhongo ayo kwaye ifuna ngaphezulu: Iyonyusa ithagethi yayo ukuthunyelwa kwezigidi ezingama-200 kunyaka olandelayo. Umthombo ukwathi i-Oppo kunye neVivo, ezinye iinkampani ezimbini ezaziwa kakhulu, ziya kubona ukonyuka okuthobekileyo kwe-10% kunyaka olandelayo. (Fumanisa: IHuawei isondela kwi-Samsung kwimakethi yehlabathi)
Ngokumalunga nesabelo sentengiso, ingxelo yoPhando lwakutsha nje ithi oko U-Huawei uyinkokheli yentengiso e-China, ene-23%, kwaye ilandelwa ngokusondeleyo ngu-Oppo kunye neVivo, zombini nge-21% inye. IXiaomi, eyinxalenye yayo, yeyesine etafileni, kunye nesabelo sentengiso se-13%, ngelixa iApple ivala i-5 ephezulu ngesabelo sentengiso se-9%. Endaweni yoko, i-Samsung yabona isabelo sayo sentengiso sehla saya kwi-1%. (Fumanisa: IHuawei ikwindawo yesibini ethengisa kakhulu kwihlabathi liphela).
Silindele ukuba imakethi ye-smartphone kunyaka olandelayo ijonge ngakumbi amandla kunye ne-badass. Iinkampani ezininzi ziyayinyusa imveliso yazo kwaye zivelisa izibonelelo ezingaphezuluKe ukuba uHuawei, uXiaomi kunye nezinye iimveliso bafuna ukubanjwa kwala manani kwaye, nangakumbi, bafumana ukwamkeleka ngakumbi kuluntu oludlayo, kuya kufuneka basebenze nzima kwaye bangathobisi nangaliphi na ixesha. Yonke into ilindile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IHuawei iceba ukuhambisa izixhobo ezizigidi ezingama-200 kwihlabathi liphela kunyaka olandelayo